Ukucaciswa kweMveliso- Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Igama Product: kn95 imaski yokhuselo non-zonyango
Umzekelo: AKF 2002
Umgangatho oLawulayo we-GB2626-2006: i-GB 2626-2006;
1. Ukusilela ukulandela imiyalelo kunye nezithintelo zemanyuwali kuya kuchaphazela ngamandla amandla emveliso, anokukhokelela kwizifo, ekwenzakaleni okanye ekufeni.
2. Kubaluleke kakhulu ukukhetha iimveliso zokhuselo lokuphefumla ngokuchanekileyo. Ngaphambi kokusebenzisa, nceda uqeqeshe abasebenzisi ukuba basebenzise ukhuseleko lokuphefumla iimveliso ngokuchanekileyo ngokwemigangatho esebenzayo yokhuseleko kunye neyempilo.
3. Le mveliso ayinikezeli ioksijini. Nceda uyisebenzise kwindawo eneoksijini eyaneleyo kunye nokungena komoya okuhle.
4. Kwimeko yezi meko zilandelayo, nceda utshintshe imaski ngexesha:
A. IDyspnea ebangelwe kukuthintelwa kakhulu ngenxa yokusebenzisa gwenxa.
B. Imaski yonakele
5. Kwimeko yesiyezi, ukucaphuka okanye okunye ukungonwabi, Nceda ushiye indawo engcolileyo kwangoko.
1. Kwimeko yeempawu, Musa ukusebenzisa le mveliso ukungena okanye ukuhlala kwindawo engcolileyo
Umxholo weoksijini ungaphantsi kwe-19.5%;
B. Ukuba ungcoliseko luye lunukisiwe okanye lwangcamlwa;
C. Ubungozi begesi okanye bomphunga;
D. Ungcoliseko olungaziwayo okanye uxinzelelo lwalo, okanye indawo eyingozi ebomini okanye empilweni
E. Ukuqhushumba kwesanti, ukupeyinta kunye nomsebenzi weasbestos;
F. Indawo yokuqhuma
2. Musa ukuphinda wenze imaski ngaphandle kwemvume
3. Izinwele ezininzi njengeendevu ziya kuchaphazela i ukukhusela isiphumo ye le imveliso !
4. Ngaphambi kokuba nganye uyisebenzise, ​​kufuneka ujonge imaski ukuqinisekisa ukuba akukho mngxunya okanye monakalo kumzimba womaski. Ukwandiswa komngxunya okubangelwe kukukrazuka kwezinto zokucoca ulwelo kuthathwa njengomonakalo.
5. Le mveliso inokucoca ulwelo oluthile, kodwa alunakuphelisa umngcipheko wokungcola emoyeni. Ukusetyenziswa gwenxa kunokubangela izifo kunye / okanye ukufa.
6. Le mveliso ibhalwe "NR" kwaye ayinakusetyenziswa ngaphezu kwesinye.
7. Le mveliso ayifanelekanga kubasebenzisi abaneendlebe ezonakalisiweyo.
1. Ukuhambisa imaski, iklip yempumlo egobile.
2. Lungisa imaski empumlweni nasemlonyeni, kwaye utsale intloko yokunxiba ngasemva kwendlebe.
3.Ukusebenzisa izandla zozibini, qhoboshela ikliphu yempumlo uze utsale umbhinqo wentloko ukuqinisekisa ukutywinwa kwemaski.
4. Uvavanyo lokuTywina
A. Yenza uvavanyo olufanelekileyo ngaphandle kwezibuko lomphunga, Gquma imaski ngezandla zozibini, kwaye uphefumle ngamandla.
B. Ukuba ukuhamba komoya kuvakala kufutshane nempumlo, lungisa kwakhona / cofa ikliphu yempumlo. C, Ukuba ukuhamba komoya kuvakala emaphethelweni emaski, lungisa imaski / iqhiya yentloko
5. Ukuba ukuphefumla kunzima okanye imaski yonakele okanye okhubazekileyo, tshintsha ngoko nangoko.
6. Ukuba ukutywinwa kobuso okufanelekileyo akunakufezekiswa, tshintsha imaski
7. Linyathelo elibalulekileyo ukusebenzisa isixhobo sokuphefumla ngokukhuselekileyo ukugcina le miyalelo ngononophelo.
Indlela yokuGcina: iqondo lokushisa eligcinwe lisuka ku-20 ukuya ku-40 negative, ukufuma komoya ongaphakathi kungaphantsi kwama-80%, ubungqina bokufuma, ubungqina bemvula, umoya ongenisa umoya kunye nobungqina belanga
Umenzi: Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Idilesi: Isakhiwo se-E6, isayensi kunye neTekhnoloji yePaki yezolimo, iSithili seXixiu, Anshun, Guizhou